Atletico Madrid oo u soo bandhigtay Real Madrid dalab xoogan ay kaga dooneyso mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
Atletico Madrid oo u soo bandhigtay Real Madrid dalab xoogan ay kaga dooneyso mid ka mid ah xiddigaheeda
(Madrid) 16 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxay dooneysaa inay lasoo saxiixato xiddiga khadka dhexe reer Colombia iyo Real Madrid ee James Rodríguez, inta uu furan yahay suuqan xagaaga, sida ay qortay saxaafada.
Xiddiga reer Colombia ayaa ku dhowaaday inuu u dhaqaaqo kooxda Napoli maalmihii lasoo dhaafay, laakiin dalabka Real Madrid miiska loo soo saaray ee gaarsiisan 42 milyan oo euros, ayuu iska diiday madaxweynaha Naadiga Florentino Perez.
Wargeyska “ABC” ee dalka Spain ayaa sheegay in James Rodríguez uu ku wargaliyay wakiilkiisa inuu doonayo inuu ku noolaado magaalada Madrid, sidaas darteed wuxuu door bidayaa inuu u ciyaaro Atletico Madrid, halkii uu kaga biiri lahaa kooxda Napoli.
Hadaba sida ay wararku sheegayaan Atletico Madrid ayaa dhankeeda xiiseeneysa inay gacanta ku dhigto adeega laacibkan, waxayna dooneysaa inay kula soo wareegto qiimo gaarsiisan € 50 million oo ah qiimo go’an, lagu daray 10 milyan oo kale ee ku xiran qaab ciyaareedkiisa kooxda iyo hadii uu koobab kula guuleysto.
Marc Overmars oo weerar ku qaaday Ozil, wuxuuna dhinaca kale xaqiijiyay in Hakim Ziyech uu ka fiican yahay isaga
Luka Jović oo ka warbixiyay inay jiraan riyooyin waaweyn uu doonayo inuu ku gaaro Real Madrid